The Top 5 Mere Brands mgba na Quantify Social ROI | Martech Zone
Fraịdee, June 29, 2018 Douglas Karr
Anyị kesara otu ihe ọmụma dị egwu nke na-akọwa otu azụmahịa nwere ike tụọ mgbasa ozi mgbasa ozi ha na ntinye ego. Nyocha ROI na mgbasa ozi mmekọrịta abụghị ihe ịma aka ya. N'ezie, enweghi ike iji tụọ mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta - ọ dị nwute - dugara ọtụtụ ụlọ ọrụ ịhapụ mgbasa ozi ọha na eze kpamkpam.
Ndi Social Media gị dị irè?
N'iji weghachite nloghachi nke ntinye ego (ROI) maka mbọ mgbasa ozi ọha na eze abụwo okwu na-ese okwu na ndị ahịa. Azụmaahịa karịa mgbe ọ bụla na-etinye ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke akụ na ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi, mana ọtụtụ ka enweghị ike ikpebi ma mbọ ndị ahụ na-aga nke ọma. Nke a bụ ụfọdụ n'ime usoro na nsogbu ịma aka dị iche iche na-eche ihu na-atụle mmekọrịta ROI. Via MDG
The Top 5 Mere Brands mgba na Quantify Social ROI:
Ha enweghị ike ijikọ mgbasa ozi mmekọrịta na nsonaazụ azụmahịa - Agbanyeghị usoro itinye aka na nsuso, ụdị enweghị ike ịhụ etu mmekọrịta na mbak na-esi emetụta ego ha nwetara.
Ha enweghị ọkachamara nyocha na akụrụngwa - Ọtụtụ ndị na-ere ahịa dị ọhụrụ na mgbasa ozi mmekọrịta yana ngwa ọrụ nyocha. Enwere ike inwe usoro mmụta ka ndị ahịa na-agbanwe maka nyiwe ọhụụ wee bido igbunye akụ iji tụlee ROI mmekọrịta.
Ha na-ewepu ngwaọrụ na nyiwe na-ezughi oke - Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị na-elekọta mmadụ media nsuso ngwaọrụ dị taa, ọ bụghị ọ bụla n'elu ikpo okwu ga-enye data marketers mkpa.
Ha na-eji usoro nyocha nyocha na-ekwekọghị ekwekọ - fọdụ ndị na-ere ahịa enweghị ike ịnweta foto doro anya nke ihe ịga nke ọma nke posts ha n'ihi akụkọ na-ekwekọghị ekwekọ.
Ha na-adabere na data dara ogbenye ma ọ bụ nke a na-apụghị ịdabere na ya -Ọdịmma nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya natakwara ihe. Dịka ọmụmaatụ, usoro ntanetị mgbasa ozi jupụtara na akaụntụ adịgboroja na nke abụọ. Ọrụ sitere na akụkọ ndị a nwere ike imetụta izi ezi nke data gị mgbe ụfọdụ.
Ọ bụ ezie na nke a na-arụtụ aka na teknụzụ, ntakịrị, m ga-arụ ụka na ikekwe ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-anaghị agbasa mgbasa ozi mmekọrịta maka ihe dị mma maka ya. Dịka ọmụmaatụ, nyocha maka nhazi ngwaahịa na ịzụ ahịa. Nwere ike nyocha ma chọta ọtụtụ ozi gbasara ezigbo ndị ahịa gị, ndị na-ege ntị, ndị na-ege ntị, ọdịdị ala ha, mkpali ha, mkpesa ha, nsogbu ha, na ndị ọzọ. Iji data ahụ, ị ​​nwere ike ịkwalite atụmatụ gị na onyinye ngwaahịa gị iji mee ka onwe gị dị iche na ahịa gị. Kedu otu ị ga-esi kọwaa nke ahụ? O siri ike ịdọrọ akara ahụ, mana anyị maara na ọ bara uru.
Ihe omuma atu ozo. Onye ahịa na - agbagha nsogbu na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ma kesaa iwe ha site na mgbasa ozi. Nke a na-enye ebe ọha na eze iji gosipụta otu ị si akwado ndị ahịa gị. Fọdụ ụlọ ọrụ na-ebute okwu ahụ ụzọ nke ọma dabere na mmetụta nke ndị ahịa… mana anyị elelela ka ndị na-enwe mmetụta karị na-eburu ma mee ka okwu a pụta. Ugbu a ndị ahịa ahụ nwere nkụda mmụọ, ndị na-emetụta ihe, na ndị niile na-akwado ha na ndị na-eso ụzọ ha na-ele anya.
Dabere na ma ị kụrụ homerun ma ọ bụ gbatuo, kedụ etu esi emetụta azụmahịa gị? Nke ahụ siri ike ịkọ. Dị ka MDG Mgbasa ozi na-ekwu na mwepụta nke ha ọhụrụ infographic, na ROI nke Social Media:
Chọta ụzọ dị mma ga-ewe oge na mbọ, mana ịmara etu esi agbaso usoro mgbasa ozi mmekọrịta gị na ntanetị ga-eme ka itinye ego ahụ bara uru.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu nke gosipụtara etu azụmahịa si agba mgba, ihe ha nwere ike ịlele, ebe ndị ahịa na-ahụ ohere, yana nsogbu ndị metụtara ya.